Iran oo dhaqaalaha ay ka hesho Soomaaliya 38% kordhay sanadihii u danbeeyay | Arrimaha Bulshada
Home News Iran oo dhaqaalaha ay ka hesho Soomaaliya 38% kordhay sanadihii u danbeeyay
Iran oo dhaqaalaha ay ka hesho Soomaaliya 38% kordhay sanadihii u danbeeyay
Sunday, July 02, 2017 News Edit
Bulsha:- Xafiiska ururka ganacsiga u qaabilsan ee dalalka Carabta iyo Afrika ee dowladda Iiraan ayaa sheegay inuu kordhay daqliga dowladda Iiraan kasoo gala alaabaha ay u iib geyso Soomaaliya.
Warbixin kasoo baxday Ururkaasi oo lagu daabacay wakaaladda wararka ee dalka Iiraan ee lagu magacaabo IRNA ayaa lagu sheegay in dowladda Iiran Sanadkaan daqliga kasoo gala Alaabaha ay u dhoofiso Soomaaliya in uu kordhay 38% kiiba.
Wakaaladda ayaa sheegtay in dowladda Iiran ay Soomaaliya u soo dhoofiso Alaabo ay ka mid yihiin Shamiitada, Cabitaanada,Dawooyinka iyo Alaabaha Maacuunta.
Mas’uuliyiin ka tirsan Wasaaradda Ganacsiga Iiran ayaa sheegay in dowladdaha Iiran iyo Soomaaliya uusan joogsan ganacsiga ka dhaxeeyay tan iyo markii uu xumaaday xiriirka Labadal.
Sidoo kale waxa ay sheegeen in aysan jirin waxyaabo dowladda Iiraan kaga yimaada dhanka Soomaaliya ama looga soo dhoofiyo.
Dowladda Soomaaliya ayaa xiriirka u jartay dowladda Iiran ka dib markii ay ku eedeeysay in ay Soomaaliya ka faafiso diinta Shiicadda, Waxaana dalka laga saaray dhammaan muwaadiniinta u dhashay Iiran ee ku sugnaa Soomaaliya.